AddThis Na-agbakwunye Icheta Onwe Onye iji Meziwanye Njikọ Aka, Ntugharị na Ego | Martech Zone
Tọzdee, Disemba 4, 2014 Douglas Karr
Otutu uwa ahia ahia lekwasiri anya na nleta. Njikọ njikọ na-apụ na chaatị ma ọ na-ebute nsonaazụ dị egwu maka ndị ahịa. Inweta mmadụ na saịtị gị dị ezigbo mfe, mana ịdebe ha ebe ahụ ma gbaa ha ume ka gị na ha zụọ ahịa dị mgbagwoju anya. Ọbụna na mbipụta dịka nke anyị, ịbawanye ọhụụ anyị dị mkpa - mana belụsọ na ndị mmadụ na ụdị ndị anyị na-ekwu maka ha na-emekọrịta ihe, ọ bụ n'efu.
Anyị ga-agarịrị ndị na-ege ntị nwere mmasị na ọdịnaya anyị - ma ozugbo anyị mechara nweta ha na saịtị anyị, anyị ga-agbasi mbọ ike idebe ha na saịtị ahụ ma ọ bụ nye ha ụzọ ha ga-esi tinyekwuo aka. Anyị onwe anyị na-eme nke ahụ site na onyinye ndenye aha na ntinye akwụkwọ metụtara ya na ọkwa sara mbara.
AddThis na-eji ike nke ọtụtụ ijeri ndị ọrụ ọ ruru iji nye gị ọdịnaya ezubere iche iji mee ka ndị ọbịa gị tinye aka na saịtị gị. Ezubere ya iji nyere ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ aka ịbawanye oge onye ọrụ na-etinye na saịtị ha site na igosi ọdịnaya na onyinye ndị ahaziri maka ọdịmma ha.
Mgbe webụsaịtị gị nwere onye ọbịa na nke mbụ ya, ịmaghị ihe onye ọbịa ahụ nwere mmasị ma ọ bụ ga-pịa. Mana AddThis amatalarịrị mmasị na mmasị onye ọrụ ahụ dabere na njikọ aka ha n'oge gara aga na saịtị ndị ọzọ AddThis. Ugbu a saịtị gị nwere ike ịlele ọdịnaya, ngwaahịa ma ọ bụ onyinye dabere na akụkọ ihe mere eme gara aga nke onye ọrụ.
Nwere ike ịtọlite ​​ezubere iche dị mfe n'ime AddThis:
You nwere ike ịlele mgbanwe dị mfe site na AddThis dashboard:
Ọrụ a bụ naanị maka ndị mgbasa ozi na ndị mbipụta kachasị elu. AddThis na-agbakwunye ya maka $ 12 / ọnwa dị ka akụkụ nke ndenye aha AddThis Pro, na-eme ka ọ dị ọnụ ala.
Tags: tinyetinye ndụmọdụ ọdịnayandenye ọdịnayaiche ọdịnayamelite ọnụego mgbanwemelite njikọ akamelite revenuemụbaa mgbanwemụbaa njikọ akadịkwuo revenuedebe ndị ọbịaọdịnaya ọdịnayajigide ndị ọbịa
Ihe kpatara ndi mmadu ji wepu aha na Email gi (na otu esi ewepu akwukwo)